Vafambisi Vangaita Sei Kuti Vakwidziridze paInternational Ecommerce Mukana weKisimusi ino? | Martech Zone
Nemusika wepasi rose weyambuka-muganho ecommerce ikozvino wakakosha pa £ 153bn ($ 230bn) muna 2014, uye inofungidzirwa kuti ichakwira kusvika pa £ 666bn ($ 1 trillion) na2020, mukana webhizinesi wevatengesi veUK hauna kumbove mukuru. Vatengi vepasi rese vari kuwedzera kufarira kutenga kubva kunyaradzo yemisha yavo uye izvi zvinotonyanya kufadza panguva yezororo, sezvo ichidzivirira mapoka makuru uye kushushikana kunosanganisira kutenga kweKisimusi.
Tsvagiridzo kubva Adobe's Dhijitari Index inoratidza mwaka wegore rino wezororo zvino unomiririra 20% yemari yepasirese yekushandisa pamhepo. NeKisimusi ichipa chidimbu chakakura chemari yevatengesi, zvigadzirwa zvine mukurumbira zvinofanirwa kuona kuti vane nzira dzakakodzera dzekushandisa mukana wepamhepo - kwete pamba chete, asi mhiri kwemakungwa.
International ecommerce inovimbisa mukana wakakura wemari wevatengesi sezvo ichipa mabhenji kugona kusingaenzaniswi ekukurumidza kukura mabhizinesi epasi rese, zvichivagonesa kupa zvinhu zvavo kune vatengi mumisika yekunze, pasina kudikanwa kwekuvapo chaiko. Kuzvipira kuendesa isina musono kutenga ruzivo ndiko kuchave kunotyaira pasirese kutengesa online paKisimusi ino.
Dambudziko nderekuti, vazhinji vatengesi kazhinji vanonetseka kuenzanisa inoyevedza yekutengesa kwenyika mumisika yepasi rose. Izvi zvinokonzerwa nezvipingamupinyi zvakasiyana-siyana zvemuchadenga kune ecommerce senge yakakwira mitengo yekutumira, isingazivikanwe mabasa ekupinza, kudzoka kusingakwanise, uye matambudziko ekutsigira mari yemuno uye nzira dzekubhadhara. Idzi nyaya dzinotora huremu hutsva mumakwikwi eKisimusi mamiriro ekunze uko kushomeka kwevatengi kunotumira vatengi kune imwe nzvimbo.
Mutemo wakakosha wekushambadzira kwepasirese ndeyekuti, kuti ubudirire, vatengi vanofanirwa kunakidzwa neruzivo rwekutenga zvisinei nenzvimbo yavo. Vatengesi havafanirwe kubata vatengi vanoyambuka muganho sekirasi yechipiri. Kuchengeta vatengi vekunze vanobatanidzwa, vatengesi vanofanirwa kuona kuti zvavo zvipiro zvemudunhu zviri nyore, zvakawanikwa uye zviri pachena
Aya mana anoteedzerwa akakosha.
Iva nesarudzo dzakawanda dzekuendesa pamitengo inonzwisisika. Yakabatana neizvi, kupa yakapusa uye isina njodzi-isina nzira yekudzoka yakakosha kune wese mutengi sezvo ichivaisa vane chivimbo chekutenga online newe.
Govera mari yemuno; pane zvinhu zvishoma zvinowedzerwa-kuisa kune vatengi vepamhepo pane kudikanwa kwekuverenga mutengo mumari yavo pachavo pavanenge vachitsvaga, tisingatauri chiyero chekutsinhana kusava nechokwadi.
Nguva dzose tarisa kuisa pfungwa yemutengi kurerukirwa. Dzivisa chero zvingangoerekana zvaitika kushamisika kwevatengi (semuenzaniso tsika dzechaji uye mubhadharo wekubata kubva kune vanotakura) nekuve kumberi nezve izvi zvinodhura.
Muzviitiko zvakawanda, dzivisa kushandura zvirimo webhusaiti yako kana kuvaka nzvimbo dzemuno. Aya mabasa anoda yakakwira mari uye kazhinji anounza yakaderera kudzoka, saka, batisisa pane chero chiito kusvikira iwe wanyatsozviratidza pachako mukati memusika.
Mabhiza haakwanise kufuratira mukana wekuyambuka muganho ecommerce ino Krisimasi. Kuzadzikisa izvi hazvireve kuti zvinoda nguva yakakura uye zviwanikwa zviwanikwa mumba. vatengesi vanogona kuwana wepasi rose wekudyidzana naye kuita zvirinani zvido zvavo uye kusangana nezvinotengeswa zvepasi rose, zvichiita iyo ROI yekuenda yepasi rose yakanaka
Technology vadyidzani vakaita Zvepasi-e inogona kutsigira vatengesi mukupa isina musono epasi rose ecommerce ruzivo uye nekupa vatengi iro danho rebasa iro rakakosha mumakwikwi ekutengesa musika. Pasina iko kuvimbiswa kwechiitiko chakasarudzika, nguva dzakaringana dzekuendesa kana kurongeka dzakatenderedza mutengo wekutengesa, vatengesi vanozove vasina kumira uye voona vatengi vavo vachisiya kutenga kana kuenda kunzvimbo yemukwikwidzi mune yekungobaya - kwete njodzi yaunoda kutora nayo vatengi vako Kisimusi ino!
Tags: Kisimusizvepasi rose-ezororokutumirwa kwenyika dzesekudyidzana kwenyikamari yemunochitorokutumirwa rateshandurodudziro yewebhusaiti